Qeybta 1: casriga Maxaad Samsung ma ciyaari karaa flash videos
Qeybta 2: Sida loo soo dajiyo ciyaaryahan flash casriga ah Samsung?
Ma aha oo kaliya Samsung, laakiin phone android ma haatan ka ciyaari karaa flash videos. Tan waxaa lagugu leeyahay xaqiiqada ah in Android kaalinta taageerada Adobe flash la Android 2.2 Froyo iyo qalab oo isku xigta oo aan ku iman Flash Adobe ka Player rakibay iyaga in ay default, ma taageeraan. Sidaa darteed, ka casriga ah Samsung hadda, kuwaas oo dhab ahaantii telefoonada android, awoodin inuu u ciyaaro flash videos.
Inkastoo android mar dambe ma bixisaa taageerada rasmiga ah ee Adobe Flash Player, waxaa jira siyaabo kale oo macneheedu yahay taas oo aad ku rakiban kartaa Adobe Flash Player aad smartphone Samsung. Ugu fudud ee siyaabahan waa in laga takhaluso chrome, browser default ee qalabka android ugu oo isticmaalaan kale ah in weli waxay bixisaa taageero flash. Laba siyaabood oo kale ah waxaa lagu muujiyey qaybta soo socota ee qodobkan.
Isticmaal Firefox Browser
Haddii browser default qalabka android aad waa chrome, ma ciyaari doono flash videos xataa haddii aad ku rakibi Adobe Flash Player in aad casriga Samsung. Sababtan awgeed waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo browser kale oo sida Firefox kaas oo taageera ciyaaro flash videos.
Tallaabo 1: Ku rakib Firefox
Madaxa on Google Play Store iyo nooca Firefox in bar raadinta. Laga soo bilaabo natiijada yimid, dooro Firefox browser iyo garaac badhanka soo dajiyo. Sug rakibo si uu u dhameystiro. Calan Firefox sida aad default browser raacaya tallaabooyinka soo socda:
1. Tag "Codsiyada" ama "Apps" ama "Codsiga Manager" ka smartphone Samsung. Doorashadan waxa guud ahaan laga heli karaa ka menu "Settings" hoos tab "More".
Si aad u hesho liiska oo dhan Chine ee telefoonka aad android 2. Switch in tab ka calaamadeeyay sida "Dhamaan". Clear default browser doorashada doorataa browser in aad isticmaasho, Chrome tusaale ahaan. Hoos si ay u helaan fursad u ku tilmaamay "la bixin kari Clear".
3. Hadda ka jaftaa kasta link online iyo markii la weydiiyay browser si ay u isticmaalaan, ka jaftaa icon Firefox iyo dooro "Mar walba" ka sanduuqa muuqata, iyo waxa la dhigi doono, sida aad default browser.
Talaabada 2: In loo sahlo Ilo Lama yaqaan
Hadda waxaad u baahan doontaa si aad u hesho gacmahaaga ku Flash Adobe ka Player apk oo tan iyo markii ay mar dambe laga heli karaa Google Play Store yahay, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay gargaar ka mid ah websites xisbiga saddexaad. Sababtan awgeed, waxaad u baahan doontaa inaad awood u rakibo oo laga helay ilo aan la garanayn in telefoonka aad android. Tani waxay si fudud in karti loo kartaa adigoo raacaya tallaabooyinka soo socda:
1. Tag goobaha ay siyoodba icon marsho qaabeeya ee menu ee aad casriga Samsung.
2. Meel ku ikhtiyaarka sida "Amniga" calaamadeeyay iyo falgali submenu in furay iyadoo ay sabab u waxaad ka eegtaa "Lama yaqaan Resources". Tubada fursad u hubiso checkbox corresponfing ah, haddii sanduuqa digniin u muuqataa, samee in ay iska tagaan by siyoodba "Okay".
Talaabada 3: Download ku File Flash rakibayo
Hel Adobe Flash Player apk ka archives rasmi ah Adobe adigoo raacaya link .
Waxaad kala soo bixi kartaa file si aad computer iyo wareejiso qalab android aad by yahay cable USB ah ama si toos ah u soo bixi, waxa uu qalab android aad. Siyaabood, mar apk waa in xusuusta aad casriga Samsung, ka jaftaa ku yaal in la bilaabo rakibo iyo in la siiyo wax kasta oo rukhsadda in laga yaabaa in ay u baahan tahay in si caadi ah u shaqeeyaan iyo tubbada "rakib" button. Sug rakibo si ay u buuxiyaan kaas oo aan qaadan wax ka badan hal daqiiqo xaaladaha caadiga ah.
Talaabada 4: Ku rakib ka Adblock Plus dar-On u Firefox
Imminka mar haddii aad karti flash oo ay leeyihiin browser ah in ay taageertaa flash videos, waxay u badan tahay in flash dhibsado ku darayaa isagoo doonistii muuqday shaashadda aad Samsung casriga ah ee ka badan sidii hore. Si aad is ogow of this, si fudud u raacaan link . Ma aad heli lahaa Adblock Plus dar-On u Firefox on Google Play dukaanka ha xataa haddii aadan rabin in aad isticmaasho link la siiyay, waa in aad la tashato websites xisbiga saddexaad si aad u hesho.
Isticmaal hoomboro Browser
Habka labaad inuu ciyaaro flash videos on telefoonka waa adigoo isticmaalaya browser hoomboro ah. The browser hoomboro, sida Firefox, taageertaa flash videos laakiin waxa kale oo aad u baahan tahay in ay Flash Adobe ka Player apk rakibay si aad casriga Samsung.
Tallaabo 1: Ku rakib Adobe Flash Player
Si aad u heshid tilmaamo ku saabsan sida aad u heli apk Adobe ah oo ku xidh si aad casriga Samsung, dib u tag qaybta hore ee maqaalka.
Tallaabo 2: Ku rakib iyo reserved hoomboro browser
1. Head on Google Play Store oo nooca in hoomboro Browser. Tubada on hoomboro browser icon ka natiijooyinka oo ku xidh si aad telefoon Samsung. Had iyo jeer loo hubiyo in Jetpack hoomboro la karti.
2. Browser Daahfurka hoomboro in aad casriga Samsung oo taga si siman> Settings Web Content Flash Player, dooro Had iyo jeer on.
> Resource > Samsung > Sida loo Play Flash on Samsung casriga